DISTRIKA AMBOHIMAHASOA : Mitsoa-ponenana noho ny asan-dahalo ny mponina
Manjaka izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana ao anatin’ny Distrikan’Ambohimahasoa iny. 1er août 2017
Miseho lany ny fanafihan-dahalo sy ny fandravana ataon’ireo malaso. Mihorohoro andro aman’alina ny mponina vokatr’izany, ao anatin’ny tebiteby no iatrehan’izy ireo ny fiainana andavanandro izay misy fiantraikany goavana eo amin’ny seha-piharian’ny vahoaka.
Araka ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana dia miakatra an-tanàn-dehibe ny ankamaroan’ireo olona mipetraka any ambanivohitra noho ny afitsoky ny tsy fandriam-pahalemana miseho lany. Mihazo an’Ambohimahasoa avokoa ny mponina avy amin’ireo tanàna kely manodidina satria matahotra dahalo. Raim-pianakaviana iray zanaka am-pielezana avy any an-toerana no niantso an-tariby mivantana nampahalala ny vaovao misy any amin’iny faritra iny.
Nambarany tamin’izany fa manao izay danin’ny kibony tanteraka ireo dahalo rehefa manafika ary tsy mifidy fa izay hitan’ny mason’izy ireo ao an-tanàna dia alainy avokoa, tsy vitan’ny mandrava fotsiny anefa mandritra izany fa mandoro tranon’olona ary mamono amin’ny fomba feno habibiana mihitsy. Lasa mivangongo eo an-tampon-tanàna avokoa ny olona noho ny fampitahorana ataon’ireo olon-dratsy. “Mandry tsy lavo loha ny aty amin’ny Distrikan’Ambohimahasoa, vao tamin’ny sabotsy lasa teo tokony ho tamin’ny 3 ora tolakandro no nisy nanafika tao amin’ny kaominina ambanivohitr’Ankalalao.
Lasan’ireo malaso tamin’izany ny omby 20 isa mahery. Tsy nisy sahy nanohitra ny fokonolona noho ny tahotra na dia mbola nazava be aza ny andro. Ny tena olana dia manao andiany 30 ka hatramin’ny 40 isa ireo malaso isaka ny manafika”, hoy hatrany ny fitantarany. Nanao antso avo tamin’ny manam-pahefana isan-tokony ny tenany manoloana izao tsy fandriam-pahalemana iainan’ny vahoaka izao. Araka ny nambarany hatrany dia tsy hita popoka izay fandraisana andraikitra marina ataon’ireo mpitandro filaminana manoloana ny fahoriana mianjady amin’ireo vahoaka. “Isaka ny misy fanafihana mitranga dia miantso ny zandary izahay ary lazain’izy ireo fa mbola mamondrona ny “element” izy ireo kanefa andrasana tsy hita akory”, hoy hatrany ny fitarainany.
Tsy ny any amin’ny Distrikan’Ambohimahasoa ihany no mihaikaika amin’izany asan-
dahalo izany fa faritra maro manera ny nosy mihitsy.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (1943) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (908) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (204) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (109) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (92) 2 mars 2021